कोरोना महामारि: कस्तो छ नेपालको बर्तमान अवस्था ? « Nepal Health News
कोरोना महामारि: कस्तो छ नेपालको बर्तमान अवस्था ?
२०७६, १३ चैत्र बिहीबार १०:४८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट स्वदेश फर्किएका एक नेपाली युवामा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएको छ । धादिङका यी युवा गत चैत ६ गते एयर अरबियाको फ्लाइट नम्बर जी–९५३७ बाट सारजाहबाट स्वदेश फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनले विगतमा नेपालमा गरिने बन्द हडतालजस्तो मानेर निश्चित समयपछि फुकुवा हुन्छ भन्ने नठान्न आग्रह गरे । बन्द हडतालको बेला साँझ ५ बजेपछि सवारी साधन फुकुवा हुने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै लकडाउनमा फुकुवा नहुने बताए ।अन्नपूर्णपोष्टबाट